Ihe Shell: Ngosiputa desktọpụ nke oge a n'elu GNOME Shell | Site na Linux
Ọbụghị naanị nke Ebe Desktọpụ (DE) y Nchịkọta Ohere (WM) Anyị "na-ebi" (na-anụ ụtọ) ndị nwere oke mmụọ banyere ịhazi na ịkwalite Eserese eserese eserese (GUI) nke sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe, dịka GNU / Linux. Kemgbe, ọtụtụ oge anyị nwere nhọrọ dịka gburugburu (gburugburu) ma ọ bụ skins (skins) inwe ma obu ndi ozo, ma obu tinye-ons (plugins) ma ọ bụ ndọtị na-ekwe ka anyị dịtụ ma ọ bụ radically ịgbanwe visual ọdịdị nke anyị Linux.
Dị ka a na-akpọ ndọtị Shell ihe, dị na GNOME Shell, nke nwere ike inye a desktọọpụ desktọọpụ nke oge a maka Linux.
Shell ihe bụ a dịtụ na-adịbeghị anya mmepe, ebe, dị ka ya gọọmentị saịtị na GitHub ọ na-akọ mbụ ya dịnụ ntọhapụ, n'okpuru aha nke 1 mbipute, dere 10 March nke 2020, na ya ọhụrụ dịnụ tọhapụ, n'okpuru aha nke 7 mbipute, dere August 15 nke 2020.
Na mgbakwunye, mmepe ya gbadoro ụkwụ na mmepe ọzọ akpọrọ Ihe di egwu. Ha abụọ mepụtara ma debe ya site n'aka onye ọrụ akpọrọ Akwụkwọ PapyElGringo.
1 Ngwongwo ihe: Nnukwu ndọtị maka GNOME Shell
1.1 Gịnị bụ ihe Shell?
1.2 Kedu ihe Shell na-enye?
1.2.1 Ihe omuma ohuru ohuru
1.2.2 Ntugharị eserese eserese
1.2.3 Igwe nkwụnye windo dị ka winding
1.2.4 Isi ihe ndị ọzọ
Ngwongwo ihe: Nnukwu ndọtị maka GNOME Shell
Gịnị bụ ihe Shell?
Na-ekwu banyere ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na ịntanetị, a kọwara ya dị ka:
"A desktọọpụ desktọọpụ nke oge a maka Linux, agbakọ dị ka mgbakwunye maka GNOME Shell. Mee ka ahụmịhe onye ọrụ gị kwalite ma tufuo ọgba aghara na arụmọrụ nke tebụl ọdịnala. Ezubere iji mee ka igodo dị mfe ma belata mkpa ịmegharị windo iji melite arụpụtaghị ihe. Ebumnuche ya ka ọ bụrụ 100% buru amụma ma weta uru nke ngwaọrụ ndị ọkachamara chọsiri ike n'ụwa.".
Kedu ihe Shell na-enye?
Mgbe ị na-edozi Ngwongwo ihe na GNOME Shell ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ ihe ndị a atụmatụ na arụmọrụ gbakwunyere:
Ihe omuma ohuru ohuru
Ọ-enye gị ohere ịnyagharịa na eserese eserese site n'imekwu ihe enyi na enyi. Ebe ọ bụ, ọ gụnyere a oghere kachasị ọrụ ịnwe ọtụtụ ngwa ngwa n'otu oge ma gbanwee n'etiti ha ngwa ngwa.
Nke a bụ eziokwu na nke ọ bụla ndebanye ọrụ a na-egosipụta ya dị ka ahịrị nwere ọtụtụ ngwa. Ma mgbe emepere ngwa ohuru, a na-etinye ya na ngwụcha nke ebe ọrụ dị ugbu a, ebe mgbe agbakwunyere oghere ọrụ ọhụụ, a na-agbakwunye ya na-akpaghị aka n'okpuru, na-ekpughe ihe niile emere na ụzọ kachasị mma.
Ihe omume a na - eme ka ọ dị mfe, bu amụma, ma rụọ ọrụ nke ọma site na idozi windo anyị na akpaghị aka. ya gbasara ohere nke uzo awade a kensinammuo igodo na nke na-eme ka mmekọrịta na ngwa. Ke adianade do, ojiji nke keyboardzọ mkpirisi keyboard na-eme ka ọ dị nfe na ngwa ngwa ịkwaga na ala n'etiti ebe ọrụ, ma gaa site n'aka ekpe gaa n'aka nri n'etiti windo.
Ntugharị eserese eserese
Ezubere ya inye nkọwa banyere ebe ihe niile dị, yana inye ohere nyocha nke Desktọpụ Environment (DE), ma na òké ma na ihuenyo mmetụ. Banyere nhazi ya, a na-ekewa ya n'akụkụ abụọ ma ọ bụ ogwe.
El ogwe aka ekpe jikwaa ihe niile metụtara sistemụ (oghere ọrụ, ọnọdụ sistemụ ugbu a, ọkwa), ebe aka nri jikwaa oghere ọrụ a na-eji (windo dị n'ahịrị oghere ọrụ, mgbanwe nhazi, na windo ahụ). N'ime ya, ihe abụọ dị mkpa pụtara, nke bụ usoro obubọk (n'aka ekpe) na oghere ọrụ (elu).
Banyere ya visual imewe, ọ na-agbaso ụkpụrụ nduzi nke Style Ihe Desing, nke na-enye ntọala siri ike nke na-enye ohere inye a aesthetic na ukwuu inweta interface. Na mgbakwunye, ọ gụnyere isiokwu atọ dịnụ bụ: Ọchịchịrị, Ìhè na Isi. Nke ikpeazụ na-enye anyị ohere iji agba nke nhọrọ anyị. Ọ na-awade ekwe omume blur na interface, n'ihi na ndị ọrụ na-achọ a na-egbu maramara yiri enyo.
Igwe nkwụnye windo dị ka winding
Ọ na - enye gị ohere ịhazi windo gị n’ụzọ a na - ahụ anya nke na ha anaghị agabiga, nke na - ewepu njimara nke njikwa windo. N'ihi ya, Shell ihe na-enye ohere ụzọ dị iche iche iji gosipụta windo nke taịl nile udi. Ndị a bụ ihe ndị a:
Maximized: Otu windo na-ewe ebe ọrụ niile.
Kewaa: windo abụọ, otu n’akụkụ nke ọzọ, na-ewe ọkara nke oghere ọrụ ọ bụla.
Kọlụm: A na-egosipụta windo niile dị ka ogidi (bara uru maka nyocha sara mbara)
N'etiti: A na windo n'aka ekpe ya na windo ndị ọzọ na-echekwa n'aka nri.
Na Grid: A na-egosipụta windo niile dị ka ntanetị.
Isi ihe ndị ọzọ
Ihe Shell na-enyekwa nnọgidesi ike, nke ahụ bụ, ikike icheta na / ma ọ bụ hazie ọnọdụ mmeghe windo. Na egwuregwu magburu onwe ya keyboardzọ mkpirisi keyboard iji jikwaa ihe dị mkpa, na-ezere iji oke.
Iji mụtakwuo banyere Shell ihe ma ghọta nke ọma ihe niile akọwara n’elu dị ka, ị nwere ike ịga leta ndị a njikọ gọọmentị en GNOME Extensions, ma lee ya anya site na vidiyo YouTube gị, tupu ịnwale ịgba ọsọ gị nwụnye usoro.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere fabulous ndọtị maka GNOME Shell akpọ «Material Desing», nke na-enye a ihu igwe desktọọpụ nke oge a maka Linux; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Ihe Shell: Ngosipụta desktọpụ nke oge a n'elu GNOME Shell
Nkwo 1480 dijo
Ndewo, enwere m ndọtị a na ekele nye onye kere ya, mana okwu m na-aga na ibe blọgụ a.desdelinux.net oge ọ bụla ị gara na peeji a ọ na-agwa m ka m nara kuki ma nabata ya, mgbasa ozi nke eziokwu ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Ihuenyo nke ekwentị m na-eme ka ịgụ isiokwu ahụ bụrụ ihe na-akpasu iwe, biko ndị enyi, gbadaa karịa na mgbasa ozi, n'ọtụtụ oge akwụsịla m ịgụ isiokwu ndị ị na-ebipụta n'ihi nke a ma ugbu a enwere m oge ụfọdụ m na-ekwu banyere nkọwa a. , Achorom na i ma ka ighota, ekene
Zaghachi ka Dextre 1480
Ngosipụta Ngosipụta: Gini bụ ndị njikwa nbanye na Linux?